နိဗ္ဗာန်ဆော် စာတမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နိဗ္ဗာန်ဆော် စာတမ်း
- loveless. loveless2009
Posted by loveless. loveless2009 on Feb 2, 2013 in Copy/Paste |3comments
၁။ ဘ၀န္တော- ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန် စိတ်ရည်သန်၍ ထက်သန်ညွှတ်ပြောင်း၊ အို… သူတော်ကောင်းတို့…. ဒုက္ခ၀ဋ်အတွင်း မလွတ်ကင်း၍ ပူခြင်းအဖြာဖြာ အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာသြဃ ဤဘ၀မှ လွတ်ရန်အသွယ်သွယ် လှည့်လည်နှိုးဆော်(ခေါ်) နိဗ္ဗာန်ဆော်က ရည်မျှော်စေကြောင်း ဆုမွန်တောင်း၍ ပြည်မနိဗ္ဗာန် ရောက်စေရန်အတွက် လူဖွယ်ကပ်၍ ၀ပ်တွားကာ အဓိဋ္ဌာန်ထားကြဖို့ နိဗ္ဗာန်တံခါး ဖွင့်ရန် ကြွတော်မူကြပါ ဘ၀န္တော-သပ္ပုရိသအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့…….။
၂။ ဘ၀န္တော- တရားဒေသနာ ရှာဖွေကာဖြင့် နေထိုင်ကြညောင်း အို..သူတောင်ကောင်းတို့၊ အယံကာလော- ဂေါတမမြတ်စွာ သာသနာနှင့် ကြုံကြိုက်လေရာ ယခုအခါကား၊ ဒါနကာလော- နည်းသည်များသည် ခြားမရည်ဘဲ ပွားကြည်နှလုံး တရားအဆီသုံး၍ ရွှင်ပြုံးကြူလျှမ်း လှူဒါန်းကြရမည့် အခါပေတည်း။ တသ္မာ- ထို့ကြောင့်၊ တုမှေ- နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်း သင်သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့သည်၊ ဥဋ္ဌေထ- ကုသိုလ်ပြုရန် အချိန်တန်၍ ထတော်မူကြပါ့ ဘ၀န္ထော- သပ္ပုရိသအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့…..။
ဘ၀န္တော- အို,နာ,သေရေး ဒုက္ခဘေးမှ ကင်းဝေးလိုကြောင်း အို.. သူတော်ကောင်းတို့… သံသရာဘုံကြော စုန်ဆန်မျော၍ သြဃလေးဖြာ ၀ဋ်တဏှာမှ လွတ်ရာရည်မျှော် (ခေါ်) နိဗ္ဗာန်ဆော်က ရည်ရော်လမ်းပြ မှန်းကာဆ၍ နန်းအမတရွှေဘုံ ခိုလုံရန်အတွက် လှူဖွယ်ကပ်၍ ၀ပ်တွားကာ အဓိဋ္ဌာန်ထားကြဖို့ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်ရန် ထတော်မူကြပါ့ ဘ၀န္တော-သပ္ပုရိသအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့………
About loveless. loveless2009
loveless. loveless2009 has written 1 post in this Website..
View all posts by loveless. loveless2009 →
ကျုပ်အနေဖြင့်တော့ ပါရမီနုနယ်တယ်ပဲပြောရမလား ဘယ်လိုကြောင့်ရယ်ပြောရမလားတော့မသိဘူးဗျ။
နိဗ္ဗာန် ကိုရောက်ချင်စိတ်နည်းတယ်ဗျ။ ဘာမှအဖြစ်ရယ်လို့မရှိ အပျက်ရယ်လို့ မရှိဘာမှမရှိတော့တာကို
နိဗ္ဗာန်လို့သိထားပါတယ်။ အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်း ကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန် ဆိုပေမယ့် မရောက်ခြင်သေးတာ
တော့အမှန်ပဲဗျ။ တဏှာကြောင့်ပဲပြောမလား လူ့စီးစိမ် နတ်စည်းစိမ် ဆိုတာတွေခံစားပြီး
နေချင်တယ်။ အပ္ပာယ်တော့ မရောက်ချင်ဘူး တိရဈာန် တော့မဖြစ်ချင်ဘူး ဘ၀ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း
လူ ဖြစ်ပြီးပဲ နေချင်တယ်။ ခန္ဓာရှိနေသမျှ မချမ်းသာဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်
လူ ဖြစ်ပြီး လူ့ဘ၀ မှာနေရတာကို ပျော်နေပါတယ်။
ကျုပ် နံနက်တိုင်း နီးပါး ဖွင့်နေကြဖြစ်တဲ့ ..
အဆိုတော် နီနီဝင်းရွှေရဲ့ …
“ဘ၀န္တော” သီချင်းလေးကို ပြေးသတိရလိုက်မိတယ် ….